Masindahy Claude La Colombière
15 febroary — I Claude La Colombière dia teraka tamin'ny taona 1642 tao amin'ilay tanana antsoina hoe Saint-Syphorien-d'Ozon ary maty tao Paray-le-Monial ny 15 febroary 1682. Tao Avignon izy no novisy tao amin'ny Fikambanan'i Jesoa. Avy eo izy nanohy ny fianarany tany Paris.
Tao no nifandraisany tamin'ireo olona mpanohitra ny fanavaozana tao amin'ny Fiangonana Katôlika. Rehefa nohamasinina ho pretra izy dia nampianatra tao Lyon, avy eo notendrena ho lehiben'ny Kolejy Paray-le-Monial ary tao izy no nihaona tamin'i Marguerite-Marie Alacoque relijiozy tao amin'ny fikambanana Visitation de Sainte Marie. I Claude no lasa mpitantana am-panahy an'i Marguerite-Marie avy eo ary nanampy azy nanapariaka ny fomba fivavahana fanajana ny Fo Masin'i Jesoa.
Taty aoriana kely i Claude dia lasa mpitantana am-panahy ny Duchesse d'York tao Londres. Tao izy no nofonjaina ny taona 1678 noho izy nolazaina fa "papiste" izany hoe ireo izay manaiky ny papa. Niverina tany Lyon indray izy avy eo ary nody tany Paray-le-Monial ka tao izy no nodimandry teo amin'ny 41 taonany. Maro ny asa soratra navelan'i Claude, tao ny toriteny, ny fandinihana ny fijalian'i Kristy, ny famakafakana ary ireo taratasy momba ny fikolokoloana ny fanahy.